中文 Ruush Español
Organic bacriminta Production Line
Xarunta bacriminta Production Line
Haydarooliga Compost Turner
Disc bacriminta Granulator
Belt Conveyor System waa qayb ka mid lagama maarmaan ah in line u-soo-saarka bacrimin dhan. Waxaan ku siin macaamiisha conveyor suunka dhiiran iyo rabitaan-xagal conveyor suunka sare. conveyor The dhiiran wada isku xirta qalabka ugu muhiimsan ee lagu bacrimiyo, samaynta fudud ah alaabta ceeriin iyo gaadiidka badeecada dhammeeyey. Qoraalkani wuxuu ku taabato conveyors waxaa loo isticmaalaa in codsiyada iilan iyo hoos u dhac in ay u oggolaadaan in la Bacriminta ururay halka wareeggaa dabaq ama conveyor Mire Waqaf. Waxa badbaadiyay shaqada, waqtiga iyo tamarta, iyadoo characters of oolnimada sare & hawlgal fudud. conveyor dhiiran waxaa si balaadhan looga isticmaalaa ma aha oo kaliya in xarunta & wax soo saarka bacrimin organic, laakiin line-soo-saarka qoryo & feed kaabsal, taas oo hagaajin karo iyadoo la raacayo shuruudo macaamiisha. Qoraalkani wuxuu ku saaray galay Ayaxaasi ee conveyor ah. Ayaxaasi qaadashada waxa uu leeyahay taarikada caag-xidhitaanka si loo yareeyo wax khasaare. Marka duugoobin, taarikada, kuwaas oo si fudud loo saari karaa. The conveyor suunka dhiiran waxaa dhisay reer jartey ahama. jir ayaa ka jira ka mid ah qaybaha in loo wada xidhay. suunka conveyer waa on sale kulul.
Previous: Bacrimin Machine Baako
Belt Width (mm) Length Belt (m) / Power (kw) Belt Speed ​​(m / s) Capacity (t / h)
Fiiro gaar ah: awoodda dhabta ah waxaa go'aan by set dhameystiran
1. design Compact, ku haboon, waayo, hadhuudh, budo ama bacriminta waxyaabaha.
Belt conveyor ka kooban yahay rollers iyo suunka conveyor u xiran yihiin. Waxaa jira laba rollers mid waxaa loogu talagalay conveyor qoqobada mid kale wadista waxaa loogu talo galay beddelidda jihada motor of conveyor ah. Head rullaluistemadka waa drived by conveyor motor waxaa draged xoog of khilaaf oo ahbaa ka duuban madaxa iyo conveyor. Head rullaluistemadka waxaa inta badan lagu wadaa in dhamaadka Fasaxidda in la kordhiyo kala jar waayo, waxayna jiidayeen ka wanaagsan. Waxyaabaha la quudiyey ka dhamaadka feed iyo ku dhacaa, suunka conveyor qoqobada iyo saaray dhamaadka bixinta conveyor.
Bacrimin Machine Baako
No. 58 Xinjinqiao Road, Pudong, Shanghai, Shiinaha